Isililo: Eziyodla uMshengu izintuthane ziyobonakala ngamakhanda abovu - Bayede News
Home » Isililo: Eziyodla uMshengu izintuthane ziyobonakala ngamakhanda abovu
by nguDez Khumalo
Isililo siqhuma nhlangothi zonke ngokuhamba kukaDkt uBhekizizwe Joseph Shabalala obengumsunguli nomholi weLadysmith Black Mambazo. Uthathe umhlalaphansi eminyakeni embalwa eyedlule ngenxa yokuxinwa wukugula nokugcine kumhlalise phansi waqhutshwa ngesihlalo.Omunye wabazwakalise isililo sabo esikhulu ngokudlula kukaBaba uJoseph Shabalala wuNks uLinda Bukhosini Oyisikhulu Esiphezulu esikhungweni i-The Playhouse eThekwini. Exoxisana nentatheli yeBAYEDE uNks uBukhosini ulandise iphephandaba ngokuhlangana kwakhe noMshengu eNew York e-USA. “Ngakhulela elokishini ngikhonze ukulalela umsakazo. Nganginothando lokulalela umculo wesicathamiya kanti iqembu engangilikhonzile kwakuyiNqaba yabeSuthu eyaduma ngengoma eyayithi, “Intolibhantshi”, kusho uNks uBukhosini. Uqhubeke wathi ngaleso sikhathi wayeneminyaka eyi-12 efunda eJuliad School of Music eNew York.
“UMshengu wafika neqembu lakhe bezocula khona e-United States of America. Ngabe sengizethula kuye nokuthi nami ngiqhamuka eNingizimu Afrika. Wabe esethi kimi wathi, hawu nenza izinto zabelungu! Wenze isiqiniseko sokuthi uma usubuyela ekhaya lo mculo uwunikeza indawo ewufanele ngoba abantu kufanele bazi ngawo,” kuqhubeka kuchaza uNks uBukhosini nothe wamethembisa uMshengu ukuthi nakanjani uyokwenza okusemandleni ukuthi umculo wesicathamiya awuphendlele indawo esikhungweni iThe Playhouse noma ayazi ukuthi kuzoba bukhuni ngenxa yabantu ababephethe ngaleso sikhathi.
“Okwangihlekisa sixoxa noMshengu wukuthi ngathi uma ngimbuza ukuthi uzokwenzani e-USA wangiphendula ngokuthi bazocula kwelinye ihholo naye angalazi igama lalo. Ngathi uma sengiyiphenya indaba yalelo hholo ayekhuluma ngalo ngathola ukuthi yiCarnegie Hall okuyihholo elikhulu hhayi e-USA nje kodwa emhlabeni jikelele. Lokho kucula laphaya kwakuthatha iBlack Mambazo noMshengu kubabeka eqophelweni eliphezulu kakhulu emhlabeni,” kuchaza uLinda.
Ukuphetha indaba ende ibe mfishane uLinda uthi uma esebuyile eNingizimu Afrika kwadingeka enze imizamo yokufezekisa isethembiso ayesenze kuMshengu. Waqala ukuhambela iYMCA okuyindawo okwakubanjelwa kuyo imincintiswano yesicathamiya. “Kwaba nenkinga yokuthi umqhudelwano wesicathamiya wawungeke ulungelane nePlayhouse ngokwendlela oqhutshwa ngayo. Zazizokhulekwaphi izimbuzi ezazibekwe njengemiklomelo ePlayhouse? Kwaluhlobo lwamalambu akhona lwalungalungelene nemiqhudelwano edonsa ubusuku bonke. Nemali yokuxhasa imiqhudelwano yaba yinkinga kwaze kwasiza inkampani yakwaBP neNBS ukuthi umqhudelwano uqhubeke. Kuso sonke lesi sikhathi uBaba uShabalala wayelokhu eseduze kwami engichazela ngemikhuba eyenzeka uma kuqhudelwana esicathamiyeni. Wenza omkhulu futhi umsebenzi wokuvikela isithunzi sami njengomuntu wesifazane emqhudelwaneni wesicathamiya onabantu besilisa ikakhulukazi,” kubeka uLinda.
UNks uBukhosini uthe kuningi abakwenzile beyi-The Playhouse ukuhlonipha iqhaza likaMshengu nelaMambazo endimeni kacothoza. Udalule nokuthi ngoMgqibelo lo wakusasa ntambama kuzobe kuhlonishwa yena uMshengu ngamaqembu nabathandi besicathamiya khona eThe Playhouse. “Sengiphetha angidlulise amazwi enduduzo emndenini naseqenjini ngokudlula kukaMshengu silahlekelwe ngumuntu omkhulu kodwa obezithobe ngendlela eyisimanga”, kuphetha uNks uLinda Bukhosini. Uma ingosi ibuyela emuva kancane, sekukhulunywe kakhulu ngokomnikelo waleli qhawe emculweni. Awuphumeleli amaGrammy kuze kube kahlanu ikhono lakho kokwenzayo lidlule lingatshazwe. Awuhlonishwa yizikhungo zemfundo ephakeme unikwe isithunzi sokubizwa ngoSolwazi nangoDokotela uma ukwenza kwakho kungekhona okudlulelayo kokwabanye abantu.
Awubi umzali okuthi abanye bexakwe yizingane eziqhutshwa ngogovane ngokuziphatha okungenasibonelo kodwa ezakho zize zibe zine ezabafana zithi, “sizolandela izimfundiso zikababa, nabantu basibone impela sihambisa okwakhe.”Lo Dkt uJoseph Shabalala olele namuhla ugudlane amahlombe nabaculi abahlonishwayo emhlabeni. Lapha sibala oMichael Jackson, oPaul Simon, oHugh Masekela, oRay Phiri, oThandiswa Mazwai nabanye abaningi. Amaphimbo eqembu lakhe Amambaz’ Amnyama alolongeke ngendlela yokuthi ayinyama ngisho kubadidiyeli bamafilimu. Iyezwakala iMambazo icula phambili ingenisa ingqayi ka-Eddie Murphy nokumanje kuthwetshulwa ingxenye yayo yesibili iComing to America! Ku-The Lion King ikhona, ku-Invictus, iCry The Beloved Country namanye. Miningi idida ingqondo imisebenzi kaDkt uShabalala, ukulanda ngayo sikushiyela abanye.
Usehambile uMshengu kodwa ngabe isizwe sifundeni kuye okuyosisiza ngomuso? Lapha kubhekiswe kwaboHlanga ngenxa yokuthi uMshengu impilo yakhe uyiphile ngaphansi kwesihluku sobandlululo kodwa akavumanga ukuba abaphathi bobandlululo babalule indlela ayezoyihamba empilweni uMshengu. Isikole wasishiya emabangeni aphansi nokwakungamenza abone ikusasa lilufifi aqome izindlela ezazingasheshe ziqede ngempilo yakhe. Wakhetha ukusebenzisa isikhali asiphiwa wuMdali okuyizwi elimtoti nekhono lokuhlanganisa okwehlukene akwenze kube yimbumba eyisibonelo emhlabeni wonke jikelele.
UMshengu uphile kuwona lo mhlaba odunguzela ngokwepolitiki nangokwezomnotho wakwazi ukugcina ebalwa nabantu abaphumelelayo kwabakwenzayo ngokuphakamisa izinga lakwenzayo ehlise umoya. Ngaphambi kokuhlanganisa Amambazo kukhona amaqembu acule kuwo kodwa kwathi ngoba kungekho ukubona ngaso linye ngephupho ayenalo ngomculo wangayiphoqelela indlela yakhe yokucabanga kwabangaboni njengaye. Yisifundo esinqala lesi uMshengu ashiya isizwe naso. AboHlanga basabhajiwe ekuphoqeleleni abangaboni ngaso linye nabo kulokho bona abakholelwa kukho. Uma bekungenjalo isibhamu esiqhuma nsuku zaphuma sikhiphe izidumbu embonini yezokuthutha ngenxa yokungaboni ngasolinye kuseyisihlava esidonsela aboHlanga emuva. Ubengenjalo uMshengu. Indlela yakhe eya empumelelweni emculweni wesicathamiya yaba eyengwe yona okuthiwa, ‘idla ngamabala’.
Enkundleni kaCothoza wafika kunezinkunzi, oKing Star Brothers, oMpangeni Home Tigers, oDlamini Home Defenders, oMzolo Mbube Group no-Easy Walkers. Akaphoqelelanga lutho uMshengu kodwa watshela izinsizwa zakhe amaqiniso okuthi umuntu ophumelelayo emhlabeni yilowo osebenza ngokuzikhandla hayi ophoqelela intando yakhe phezu kwabanye ngokwethembela emandleni emvelo. Kuyabongeka kumaqembu uMshengu awafica enkundleni akhombise ukuwamukela amangwevu kaMshengu azimisele ukufunda okusha kuye.
UMshengu akavumanga ukuthi iqophelo lemfundo yakhe kube yilo elimchaza kangcono. Ukhombise ukuba neso elibuka kude bese liqonda indlela umhlaba osebenza ngayo. Indlela abuke ngayo isimo sepolitiki yomhlaba yenza umuntu azibuze ukuthi konje ukube uMshengu wayefunde wagogoda izinga lakhe lokucabanga laliyobanjwa kuphi? INingizimu Afrika njengezwe ibhajwe ekungakwazini ukuthatha isinqumo esimile mayelana nezilimi zaboHlanga ukuthi zesekelwe kube yizo ezisetshenziswa emfundweni nakwezomnotho. Osopolitiki bakithi balokhu beshaya izaququ bengaphumeli obala ngezilimi zaboHlanga neqhaza okumele zilibambe entuthukweni yezwe. Lokhu kwenzeka phezu kokuba bebona ukuthi umhlaba usebenza kanjani. AmaBhunu alapha ekhona ngokubambelela olimini lwawo, amaFulentshi, amaJaphane nabanye benza konke ngezilimi zabo. Lokhu kubenza bathuthuke ngokwemfundo, amasiko, umlando nezenjululwazi.
UMshengu wahola ezakhe egabe ngezingoma ezingolimi lwakhe nohlobo lwempilo alwazi kangcono. Ingoma ethi, ‘Nomathemba,’ nethi, ‘Sigijimela izinto zabanye’, nethi, ‘Isigcino uzosala wedwa webaba kaThoko ngoba ungishaya njalo’ ngazo uMshengu wayethi umyalezo waMambazo awuqale uzwakale ekhaya ngaphambi kokuthi uzwakale ezizweni.
Njengamanje kunomkhankaso wokuvuselelwa kabusha kwe-Afrika lokhu okubizwa nge-African Renaissance. Okuxakayo wukuthi ezithangamini lapho kubhungwa khona ikusasa lezwe nezwekazi lilonke kubhoke izilimi zaphesheya kwezilwandle. Ama-Afrika aseze ahlukaniswa ngokwamaqoqo akhuluma isiFulentshi nakhuluma isiNgisi. UMshengu naMambaz’ Amnyama bathi, ‘Uma umhlaba uzosemukela lokho akwenzeke sihlome ngamasiko nolimi lwethu.’
Cishe uMshengu ubengenaso isikhathi esanele sokuhlala phansi afunde ngalokho izinjulabuchopho zepolitiki nefilosofi ebezikubhala. Impumelelo yakhe kwezomculo ikhomba umuntu obehlala exakekile. Nokho okwakhulunywa nguSteve Biko eminyakeni eminingi eyedlula lapho ethi, ‘Muntu omnyama umi wedwa, kawunakusizwa muntu’ uMshengu wasiqonda leso sisho sambusa emphefumulweni. Washeshe wazi ukuthi ikusasa lakhe nelezingane zakhe lilele ezikhwepheni nasekusebenzeni kanzima. Amathuba awathola empilweni akadlalanga ngawo. Abamaziyo uMshengu nezakhe beseseClermont bayalazi ibhilidi lomqasho lapho yena nezinsizwa zakwaMazibuko, kwaShabalala nakwaMthembu zazizilolongela khona. Sekuwumlando ukuthi ngokusebenza kanzima bonke abeqembu bagcine bezimele. Asheshe wakuqonda uMshengu wukuthi esimweni lapho nonke ningaboHlanga niphefumula ngenxeba ngenxa yengcindezelo, ukuphuma kuleso simo kulele emaqhingeni anobulungiswa nokusebenza kanzima.
Uyokhumbuleka uMshengu ngokuba neqiniso ngesimo sempilo ezweni iNingizimu Afrika. Maningi amaciko okudingeke awele imingcele yobuhlanga ukuze aphumelele kwakwenzayo. Iqiniso elingephikwe wukuthi maningi amaciko aphumelele ngokusizwa ngabamhlophe ikakhulukazi ngesikhathi sobandlululo kuze kufike kulesi sikhathi. Leli yiqiniso amaciko aliphikayo phambi kwabantu ukuthi, ‘Ngize ngifinyelele kuleli lenyoni engikulo kungenxwa yokusizwa ngusibanibani ongomhlophe.’
Ukusebenzisana kweqembu likaMshengu nabamhlophe abafana noPaul Simon nabanye akubanga yinto eyaba yimfihlo kodwa wakubalula ukuthi iqembu lilapha likhona ngokomnotho ngenxa yokungenelela kwabezizwe abafana noPaul Simon. Sengathi lo moya kaMshengu weqiniso nokuphumela obala ngendlela abantu abaphumelela ngayo kwabakwenzayo bekungaba yinto ebekwa obala. Ngaleyo ndlela bekungancipha ukugobhoza kwegazi ezimbonini lapho aboHlanga bebaningi khona kubangwa izandla zabezizwe ezicashile emisebenzini okuyiyona ebaphilisayo. UMshengu usifundisile ngokubaluleka kokuphila impilo esobala uma ungumuntu.
Kunesisho saboHlanga esithi, ‘Inyanga ifa nezikhwama zayo.’ Kuyena akubanga njalo. Empilweni yonke uDkt uShabalala ubenephupho lokwakha isikole sezomculo endaweni yaseMnambithi lapho yena neqembu bedabuka khona. Ngaphezulu kwalokhu wayenesifiso sokuthi kube nezindondo ezizozuzwa yilabo abakhombisa intshisekelo nokwenza kahle kulo mculo. Kuyathokozisa ukuthi uthe elala okaMshengu lawa maphupho kwase kusondele ukuthi afezeke ngokugcwele.
Abaphathi bezemfundo bamhloniphile ngokuqamba isikole samabanga aphezulu ngegama lakhe. Ngale ndlela igama lale nsizwa seliyohlala ingolokodela yeminyaka zize zazi nezizukulwane ukuthi kwake kwaphila ishinga lakwaMshengu, uDonga likaMavuso okwathi encishwe wubandlululo ithuba lemfundo kodwa ngokungabi namhobholo wancelisa izizwe zonke nabangaphesheya kwezilwandle izimfundiso namasiko e-Afrika angeqhathaniswe nalutho olungaphansi komthunzi welanga. Ingosi yezoBuciko yaleli phephandaba ithi: “Impela zintuthane eniyozikholisa ngoMshengu niyobonakala ngamakhanda abomvu ukuthi benidla okwekhethelo kulokhu.” Isizwe sigqemeke udume olungeqiwa ntwala ngoMshengu kanti unjalo nje nomhlaba kawunoni ngokugwinya amaqhawe nsukuzaphuma.
nguDez Khumalo Feb 13, 2020